DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Wafdigii Beesha Garxajis oo Hargeysa ku soo noqday, War cusubna ka sheegay arrinta Korneyl Caarre iyo dagaalkii Sanaag. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Wafdigii Beesha Garxajis oo Hargeysa ku soo...
Hargeysa (Halqaran.com) – Wafdigii Beelaha Garxajis ee muddooyinkii dambe ku sugnaa Gobolka Sanaag ayaa maanta dib ugu soo Laabtay magaalada Hargeysa, waxaana la socda qaar ka mid ah waxgaradka Gobolka Sanaag.
”Tacab badan ayuu geliyey Suldaanku Nabadda, waxayna qiimo ku leedahay marka qofka hoghaanka uu sidan oo kale wax uga qabto, waanu ku garab taaganahay Suldaan.”
Wafdiga ka yimid gobolka Sanaag ayaa dhankooda ka mahadceliyey soo dhowaynta loo sameeyay, waxaaana Suldaan Maxamed Xirsi Qani uu sheegeen inay sidaan Nabad.
”Maanta Nabad gelyo ayaanu sidnaa, maadaama aanu muddo laba Bilood ah ku maqnayn nabadii Beelaha Gobolka Sanaag iyo Jabhadda Kornayl Caare.”
arrinta korneyl Caarre
Hargeysa ku soo noqday
Wafdigii Beesha Garxajis